आत्तिएकी गर्भवतीलाई सुरक्षित सुत्केरी गराएर बचाउँदा डाक्टरलाई भयो ठूलो पछुतो |
विश्वकप फुटबल : फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई हरायो
रोनाल्डोको ह्याट्रिकसँगै पोर्चुगलले स्पेनसँग अंक बाँड्यो
ऐतिहासिक टेष्टमा भारतसँग अफगानिस्तान पराजित
मोहम्मद सलाहको फ्यानहरुको लागि अायो यस्तो ठूलो खुसिको खबर !!
आत्तिएकी गर्भवतीलाई सुरक्षित सुत्केरी गराएर बचाउँदा डाक्टरलाई भयो ठूलो पछुतो
२०७५, २३ जेष्ठ बुधबार १२:०८ June 6, 2018 ताजा खबरबिदेश
काठमाडौं : अस्पतालमा आत्तिँदै एक सुत्केरी महिला पुगिन् । डाक्टरले तत्कालै ती महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराए । महिलाले सुरक्षित रुपमा बच्चा जन्माइन् । त्यसपछि बिरामी र परिवार शान्त भए । अचानक ती महिलाको रिपोर्ट हेरेपछि भने डाक्टरकै सातोपुत्लो उडेको छ ।
भारतको उत्तर प्रदेशको कन्नोज जिल्लामा यस्तो घटना भएको हो । शनिबार राती आत्तिँदै अस्पताल पुगेकी महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराउँदा डाक्टरलाई ठूलो आपत परेको छ । यहाँको राजकीय मेडिकल कलेज प्रशासनका अनुसार ती महिला राती १० बजे प्रसव वेदनाले आत्तिँदै अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनलाई तत्काल अपरेशन थिएटर लगियो । त्यहाँ उनले एक बच्चालाई जन्म दिइन् ।
जब डाक्टरले ती महिलाको रिपोर्ट कार्ड हेरे त्यसपछि भने डाक्टरकै सातोपुत्लो उड्यो । ती महिला एचआइभी संक्रमित थिइन् । सामान्यतया एचआइभी संक्रमित महिलालाई गर्भवती हुनै दिइन्न । यदि उनी गर्भवती भइहालेमा बच्चालाई संक्रमण भए नभएको जाँच गरिन्छ । बच्चा संक्रमित नभए बच्चालाई बचाउने प्रयास गरिन्छ । यस्ता गर्भवतीलाई सामान्य तरिकाले सुत्केरी पनि गराइन्न । तर त्यहाँ डाक्टरले कुनै सामान्य गर्भवती जस्तै ती महिलालाई सुत्केरी बनाएपछि अस्पतालको अपरेशन थिएटर नै बन्द गर्नुपर्यो ।
रिपोर्ट देख्नासाथ त्यहाँको स्त्री तथा प्रसूती वार्डका सबै बिरामीलाई बाहिर निकालियो । त्यहाँ कुनै पनि बिरामीलाई आउन रोक लगाइयो । महिलालाई तुरुन्त हायस सेन्टर पठाइयो । डाक्टरले घटनाको जानकारी प्रशासनलाई दिए । लगत्तै रातीबाटै अपरेशन थिएटरका उपकरणको सफाइ र फेर्नुपर्ने उपकरण फेर्ने काम सुरु गरियो । त्यहाँका सबै उपकरण सफाइ वा फेर्नुपर्ने भएकोले अस्पतालको अपरेशन थिएटर नै बन्द छ ।
२०७५, २३ जेष्ठ बुधबार १२:१६
छोरा विदेशमा बुहारी प्रेमीसँग कोठामा, सासूससुराले देखेर बाहिरबाट चुकुल लगाइदिएपछि…
२०७५, १८ जेष्ठ शुक्रबार १७:११
२०७५, १७ जेष्ठ बिहीबार २०:३७
ब्वाइफ्रेण्डसँग अन्तरंग हुँदै गर्दा फोन थिचिएपछि…
२०७५, २ असार शनिबार १८:०२
२०७५, २ असार शनिबार ०८:४३
२०७५, २ असार शनिबार ०८:४०
२०७५, ३१ जेष्ठ बिहीबार २०:२८
२०७५, ३१ जेष्ठ बिहीबार १९:४०
२०७५, २५ जेष्ठ शुक्रबार २१:३५
किन मागिरहेको छ फेसबुकले तपाईंको नाङ्गो तस्वीर ? जानीराखौ
एजेन्सी : बेलायती प्रयोगकर्तालाई फेसबुकले निर्वस्त्र तस्वीर पठाउन आग्रह गरिरहेको छ ।…
२०७५, १७ जेष्ठ बिहीबार १२:००
बेइजिङ, जेठ ११ । चीनको एक सहरमा एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई…
२०७५, ७ जेष्ठ सोमबार २३:४९
यदी तपाइको बिबाह हुँदैछ वा गर्नु भएको छैन भने आफ्नो बैबाहिक जिवन…
२०७५, २७ जेष्ठ आईतवार २१:३२
एकसय ३७ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ
काठमाडौँ।महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले नवौँ कोरियन भाषा परीक्षा दिने १३७ नक्कली परीक्षार्थीलाई…
२०७५, २५ जेष्ठ शुक्रबार २१:५९
विदेशबाट फर्किदा ल्याएको सुनको भन्सार कति तिर्नुपर्छ ?
एजेन्सी। सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किने नेपाली कामदारले काँचो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था…
२०७५, ४ जेष्ठ शुक्रबार १६:२०
विश्वकै प्रशिद्ध टेलिभिजनले यसरी भन्यो ‘गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमै जन्मेका हुन’ (भिडियो सहित)
एजेन्सी : करिब २५ सय वर्ष अघि नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेका विश्व शान्तिदुत…